सानिमा लाईफको आईपीओ आज बाँडफाँड हुँदै : सेयर पाउने भाग्यमानी कति ? | शुभयुग
सानिमा लाईफको आईपीओ आज बाँडफाँड हुँदै : सेयर पाउने भाग्यमानी कति ?
न्युज डेस्कप्रकाशित मिति: २०७८ श्रावण ३०, शनिबार (१० महिना अघि)
३० साउन,काठमाण्डौ – सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको साधारण सेयर (आईपीओ) को आज बाँडफाँड हुँदैछ ।
आज शनिबार इन्स्योरेन्सको कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौँमा आईपीओको बाँडफाँड हुने भएको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलले जानकारी दिएको छ ।
सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत साउन २० गते, बुधबारदेखि साउन २४ गते आईतबारसम्म प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरले ६० करोड रूपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता आईपीओ बिक्री खुल्ला गरेको थियो । जसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख कित्ता कर्मचारीहरुलाई र ५ प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषहरुलाई सुरक्षित गरी बाँकी ५४ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको थियो ।
अन्तिम दिनसम्म कम्पनीको आईपीओमा २४ लाख १९ हजार १ सय २७ आवेदकबाट ३ करोड ६९ लाख ४३ हजार ४ सय ४० कित्ता सेयर खरिदका लागि आवेदन परेको जनाएको छ । यो मागभन्दा ६।८४ गुणा बढी आवेदन हो । कम्पनीको आईपीओले हालसम्मका सबै रेकर्डहरु ब्रेक गरेको थियो । मागभन्दा धेरै आवेदन परेको हुनाले यो आईपीओको बाँडफाँड गोलाप्रथाद्धारा गरिनेछ । गोलाप्रथाबाट बाँडफाँड गर्दा ५ लाख ४० हजार आवेदकले १० कित्ता सेयर प्राप्त गर्नेछन् भने बाँकी करिब १८ लाख ५० हजार आवेदकहरुको भने हात खाली हुनेछ ।
सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ९ करोड ३६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । सोही अवधिसम्म कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा १ अर्ब ९२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चैत्र मसान्तसम्म कम्पनीले कुल १ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । हाल चुक्ता पूँजी १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा २० करोड ६३ लाख २१ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।